यी संकेतबाट थाहा पाईन्छ गर्भमा छोरा छ कि छोरी ? – ताजा समाचार
यी संकेतबाट थाहा पाईन्छ गर्भमा छोरा छ कि छोरी ?
काठमाडौं । छोरा या छोरी दुवै समान हुन् । हाम्रो समाजमा छोरा र छोरीमा गरिने भेदभाव तथा गर्भपतनका कारण गर्भवती महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको लिङ्ग परिक्षण गरिनु गैरकानुनी मानिन्छ । तर, यदि भेदभावको दृष्टिकोणले नभई उत्सुकता मेटाउनको लागि छोरा र छोरी के छ भन्ने जानकारी लिन चाहेमा आफैले घरमा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ।
यदि गर्भमा छोरी छ भने गर्भवती महिलामा महिला हार्मोनको मात्रा बढेको हुन्छ । त्यसैले उनी धेरै मुडी हुन्छिन्। त्यस्तै, शरीरक अंगहरुले पनि छोरा वा छोरी के छ भन्ने कुरामा संकेत गरिरहेको हुन्छ । यदि महिलाको स्तन को टुप्पोको रंग बढी कालो हुँदै गयो भने उनको गर्भमा छोरा रहेको हुन्छ । यदि ती महिलाको स्तन को रंगमा थोरै मात्र परिवर्तन भएको छ भने, उनको गर्भमा छोरी हुन्छ।
विश्वका देशहरुमा फरक–फरक मान्यता छन् । मुला खाए छोरा जन्मिन्छ भन्ने भ्रम नेपालीमा भएजस्तै फरक–फरक मान्यता ती मुलुकमा पनि छन् । गर्भपतिले के खान हुने, के खान नहुने भन्नेसम्मका फरक–फरक धारणा छन् । विज्ञहरुका अनुसार गर्भावस्थाको भोजनका विषयमा वैज्ञानिक तथ्यभन्दा पनि समाजका परम्परागत धारणा र हल्लाको ठूलो भूमिका भएको पाइन्छ । ती कतिपय मान्यता ठीकै पनि छन् भने धेरै गलत ।
‘गर्भवतीले फलफूल र तरकारी प्रसस्त खानुपर्छ, सम्पूर्ण खानेकुराको कम्तिमा पनि पाँच भागको एक भाग तरकारी तथा फलफूल हुनैपर्छ । माछा, मासु, अण्डा, बदाम तथा गेडागुडीजस्ता प्रोटिनयुक्त र दूध, दहीजस्ता क्याल्सियमयुक्त खानेकुरा पर्याप्त खानुपर्छ । काँचो मासु र अण्डा अहितकर हुनसक्छ ’ भनेर वैज्ञानिकहरुले सुझाव दिने गर्छन् । तर, कतिपय देशमा अनौठा मान्यता छन्, एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको यो सामाग्री पढ्नुहोस् :
–अफ्रिकाका कतिपय ठाउँमा गर्भवती महिलाले अण्डा खाए बाँझोपनको समस्या निम्तिने बताइन्छ ।